ကိုယ်တိုင်လွတ်မြောက်ဖို့ဆိုတာ သူတပါးပေါ်မူတည်တယ် | My Blog
အဲဒီလိုရေထားလို့ တော်တော်လေးရှင်းဘူးတယ်… ကျွန်တော်ကတော့ ကိုယ်တိုင်လွတ်မြောက်ဖို့ဆိုတာ သူတပါးပေါ်တည်ရတယ်လို့ ခံယူထားတယ်.. ဟုတ်ပါတယ်.. ရုတ်တရက်ကြည့်လိုက်ရင် သာမန်သိထားတာတွေနဲ့က နည်းနည်းဆန့်ကျင်နေတယ်.. ပုံမန်ယူဆထားကြတာတွေကတော့ ကိုယ်လုပ်မှကိုယ်ရ.. ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး..စသဖြင့် ကိုယ့်ပေါ်မူတည်တဲ့အကြောင်းကြီးပဲလေ.. ကျွန်တော်ကလည်း အဲဒီလိုဖြေရှင်းချင်လို့ ဒီလိုခေါင်းစဉ်တွေထုတ်လိုက်ရတာပါပဲ။
ဆိုကြပါစို့…လွတ်မြောက်မှုအကြောင်းအရင်.. လွတ်မြောက်မှု ဆိုတာဘာလဲ. ဘယ်ကနေလွတ်မြောက်တာလဲ.. ဘယ်လိုလုပ်လိုက်လို့လွတ်မြောက်သွားတာလဲ..လွတ်မြောက်သွားတော့ကော ဘာဆက်ဖြစ်သေးသလဲ..
ကဲ…လွတ်မြောက်မှုကနေ အရင်စကြရအောင်.. လွတ်မြောက်မှုလို့ပြောလိုက်ရင် အဖြေတွေအများကြီးကြားရပါလိမ့်မယ်.. ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူသူကိုယ်ကိုယ် ကိုယ့်ဥာဏ်မီသလောက် ကိုယ်သိသလို ကြားဖူးထားသလောက် နားဝနေသလောက် ဖြေကြမှာပဲ.. အဲဒီတော့ သူ့အသိနဲ့ကိုယ့်အသိနဲ့ မတူခဲ့ရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ.. ကိုယ်ထင်သလိုက အမှန်ပဲလား.. သူများတွေကကော မမှန်နိုင်ဘူးလား.. အရှုံးမပေးချင်တဲ့ မာနတွေ ဒိဋ္ဌိတွေနဲ့ပဲ ဘူးခံ ငြင်းမလား.. ဒါမှမဟုတ်ပဲ သူဟာနဲ့သူ မှန်မှာပဲလို့ပဲဆိုကြမလား.. အဲဒီလိုဖြစ်လာခဲ့ရင်တော့ ဘယ်ဟာမှန်တယ် မှားတယ်ကို ဆုံးဖြတ်နိုင်မယ့် စံတော့ယူရတော့မယ်… အဲဒီစံကိုတော့ အမြဲတမ်း မှန်နေတဲ့ ပရမတ်နဲ့ ဆုံးဖြတ်မှပဲဖြစ်လိမ့်မယ်… ပရမတ်ဆိုတာကတော့ သူကအမြဲမှန်တဲ့တရားလေ.. သူ့ပင်ကိုယ်သဘောကနေ ဘယ်တော့မှဖောက်ပြန်မသွားဘူး.. အဲဒီပရမတ်နဲ့ဆုံးဖြတ်မှ ဘယ်သူကမှန်တယ် ဘယ်သူကမှားတယ်ဆိုတာ ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်… ခုဒီမှာ.ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ လွတ်မြောက်မှုဆိုတာက ဒုက္ခတွေအကုန်လုံးကနေ လွတ်မြောက်တာပါ.. ကိုယ်သိထားတဲ့ဒုက္ခတွေကော ကိုယ်မသိသေးတဲ့ဒုက္ခတွေကောပေါ့.. ဒီမှာဘာလို့ ကျွန်တော်က ကိုယ်မသိသေးတဲ့ဒုက္ခကို ဆွဲထုတ်လာရတာလဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့မသိသေးတဲ့ ဒုက္ခတွေအများကြီးရှိနေသေးလို့ပါပဲ.. အဲဒီလိုဒုက္ခတွေကို ဘာလို့မသိကြတာလဲဆိုတော့ မသိအောင်လုပ်ထားတဲ့တရားတွေက ကျွန်တော်တို့ကို ဖုံးထားလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဒုက္ခရောက်လို့ရောက်နေမှန်းလဲမသိတာပဲ… အဲဒီ မသိတာကို မောဟလို့ပဲဆိုပါစို့. အ၀ိဇ္ဖာလို့လဲခေါ်သေးတယ်.. အဲဒီလိုကိုယ့်ကိုယ်ကို ဒုက္ခရောက်နေမှန်းမှမသိရင် ဒုက္ခကနေ လွတ်မြောက်ချင်တယ်ဆိုတာလဲမလာဘူး.. ဒုက္ခရောက်နေတာမှမသိတာ.. ဒုက္ခကနေလွတ်မြောက်ချင်တဲ့စိတ်လဲမလာတော့ ဒုက္ခကနေလွတ်မြောက်အောင်လုပ်ပါတော့မယ်ဆိုတဲ့ အတွေးကလဲ ဘယ်လိုမှ လာနိုင်စရာအကြောင်းအရှိဘူး…. အဲဒီလိုမှ ဒုက္ခလွတ်ရာအလုပ်ကို မလုပ်ရတော့ ဒုက္ခကနေလွတ်မြောက်တယ်ဆိုတာလဲ မဖြစ်တော့ဘူး.. အော်..အခုပြသလိုဘာလို့ဒုက္ခကနေမလွတ်ပါလိမ့်လဲဆိုတော့ ဒုက္ခမသိမှုကြောင့်ဆိုတာ ပေါ်လာပြီ..ကိုယ့်မှာကလဲ ဒုက္ခတွေကလဲ အပြည့်ရှိနေတာပဲ.. ဒါလဲမမြင်ကြဘူး.. မသိကြဘူး.. သိတယ်လို့ပြောပြန်ရင်လည်း အကုန်မသိတဲ့တာကတစ်ကြောင်း ဒုက္ခကို သုခလုပ်လိုက်တာကတစ်ကြောင်း မို့လို့ ရှိတဲ့ဒုက္ခက မျက်စိရှေ့မှာတင်ကို မမြင်ဘူးဖြစ်နေတာ… ဒုက္ခရှိလျက်နဲ့ မမြင်ကြဘူးဆိုတာကို နည်းနည်းလေး ဥပမာထုတ်လိုက်မယ်.. မလှုပ်မယှက်ပဲ နည်းနည်းကြာကြာလေးထိုင်မိလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲ ခန္ဓာကိုယ်ထဲက ညောင်း ကိုက် ထုံကျင်မှုတွေက ဖြစ်လာပြီ.. အဲဒီ ညောင်း ကိုက် ထုံကျင်မှုတွေက ကောင်းလားဆိုတော့ ဘယ်သူမှမကြိုက်ကြပါဘူး…. မကြိုက်ဘူးဆိုတော့ ဒုက္ခပဲဆိုကြပါစို့.. အဲဒီဒုက္ခကို ဒါဒုက္ခပဲ ဒုက္ခပဲ ဒုက္ခတွေပေါ်နေတာပါလားလို့ ဘယ်သူမှနှလုံးမသွင်းဖြစ်ဘူး.. မသိဘူးလို့ပြောတာ.. ဘယ်လိုသွားသိသလဲဆိုတော့. အင်း.ငါတော့ညောင်းနေပြီ လို့ဆိုပြီးပဲ ဒုက္ခကိုသိလိုက်ကြတယ်..အဲဒီလိုသိပြီးတော့ ညောင်းညာလေးပြင်လိုက် အကြောလေးဆန့်လိုက်တော့ ပြေသွားတယ်.. ဆိုတော့ ခုနကပေါ်နေတဲ့ဒုက္ခက သုခဖြစ်သွားတယ်.. ဒုက္ခပျောက်သွားတယ်.. ဒုက္ခကသူ့ဆီမကျန်ခဲ့တော့ဘူး…. အဲဒီလိုဒုက္ခပျောက်သွားတယ်လို့သာပြောတယ်.. ကိုယ်က ညောင်းညာတတ်တဲ့ ခန္ခကြီးကိုတော့ လွယ်ထားရက်ပဲ.. ခုနက ညောင်းညာတယ်ဆိုတာကလဲ ပေါ်ရင် ဒီခန္ခာမှာပဲ ပေါ်ရတယ်.. သွားလေရာမှာသူကပါနေတယ်. သွားလေရာမှာလိုက်ဒုက္ခပေးမယ်လို့ဆိုတာပါပဲ.. ကဲဘယ်မှာလဲ ဒုက္ခပျောက်တယ်ဆိုတာ. ကိုယ်ကသွားလေရာမှာ အဲဒီ ညောင်းညာ ထုံကျင် ကိုက်ခဲမှုတွေကို စွန့်ပစ်ပြီးမှသွားတာမှမဟုတ်ပဲ.. ဒါကြောင့်လဲသွားလေရာမှာ ဒုက္ခနဲ့တွေ့တာပေါ့.. အဲလို ညောင်းညာ ထုံကျင်ကိုက်ခဲတိုင်း ဟိုဖက်ပြင်ပေးလိုက်ရ ဒီဖက်ပြင်ပေးလိုက်ရ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပေးလိုက်ရနဲ့ ဒုက္ခတွေကို ကုနေကြတာ.. လမ်းသွားရင်းလည်း ဟိုဖက်လှုပ်လိုက် ဒီဖက်လှုပ်လိုက် .ထမင်းစားတော့ကော အတူတူပဲ. ယုတ်စွအဆုံး ဘုရားထိုင်ရှိခိုးနေတာတောင် သူကလိုက်ဒုက္ခပေးသေးတယ်.. ဟိုလူကြည့်တော့လည်း လှုပ်လှုပ်ရွရွ ဒီလူကြည့်ပြန်တော့လည်း လှုပ်လှုပ်ရွရွ လူတိုင်းက လှုပ်လှုပ်ရွရွ.. သူတို့တွေဘာဖြစ်နေကြတာလဲဆိုတော့ ဒုက္ခရောက်လို့ ကုနေကြတာပါ လို့ဖြေရုံပဲ ရှိတယ်.. အဲဒီတော့ ကိုယ်မြင်တဲ့ဒုက္ခဆိုတာက ဘာမှမဟုတ်သေးဘူး.. ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တဲ့ လွတ်မြောက်မှုဆိုတာ ကြီးကြီးဒုက္ခတွေကအစ သေးသေးဒုက္ခပါမကျန် အလုံးစုံသော ဒုက္ခကနေလွတ်မြောက်တာကို ပြောချင်တာပါ…
အဲဒီတော့ လွတ်မြောက်မှုဆိုတာ ဒုက္ခကလွတ်မြောက်မှု… ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုလုပ် သူများအပေါ်မူတည်တာတုန်းဆိုတော့.. ကိုယ်ကဒုက္ခကလွတ်မြောက်ချင်တာဆိုရင်တော့ ဒုက္ခကနေ လွတ်မြောက်အောင် လုပ်ရတော့မယ်… လွတ်မြောက်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်က စလုပ်ကြမှာလဲ.. ဘယ်လိုလုပ်မှ ရမှာလဲ… စသဖြင့် အမေးလေးတွေပေါ်လာပါပြီ.. ကိုယ်ထင်သလိုပဲ လုပ်ကြတော့မှာလား.. ကိုယ့်ပေါ်ပဲမူတည်တယ်ဆိုရင် လုပ်လေ.. ဘယ်ကစလုပ်မလဲ.. အဲဒီညောင်းညာထုံကျင်ကိုက်ခဲတာ ဘယ်တော့မှ မပေါ်ရအောင်.. မွေးကတည်းက ဘာမှတတ်ပြီးမွေးလာတာမှ မဟုတ်ပဲ.. ကိုယ့်အားပဲကိုယ် ကိုး ချင်ကြတဲ့သူတွေ.. အမိဝမ်းတွင်းထဲက ထွက်လာကတည်းက ပစ်ထားလိုက်.. ဘာမှသူ့ကို လုပ်မပေးနဲ့… ဒီလိုအရွယ်ထိရောက်လာစရာကို အကြောင်းမရှိဘူး… ဘယ်လိုလဲ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးချင်တဲ့သူတွေ…. တကယ်တော့ ပုတ်ခတ်ပြောချင်တာမဟုတ်ပါဘူး.. ထင်သာမြင်သာရှိအောင်လို့ပါ.. ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပေါ်မှာ မူတည်တယ်ဆိုတာက ဒုတိယပါ.. ပထမက တော့ သူများအပေါ်မူတည်ပါသေးတယ်.. အဲဒါမှ ကိုယ့်ပေါ်မူတည် တယ်ပဲလုပ်နေသေးရင် မွေးကတည်းက ပြစ်ထားလိုက်မှာ…
အဲဒီတော့.. သူတပါးပေါ်မူတည်တယ်ဆိုတာ ဥပမာကြောင့် နည်းနည်းပေါ်လာပြီ.. နည်းနည်းလေး… ဥပမာထပ်ဆိုကြဦးစို့.. ကိုယ်က မရောက်ဖူးတဲ့ နေရာဒေသကို သွားချင်တယ်.. လမ်းမှမသိတာ ဘယ်လိုသွားမလဲ.. လမ်းပြမယ့်သူမရှိရင်……. သွားချင်တဲ့နေရာလျှောက်သွားမှာပေါ့လား..ရောက်ချင်တဲ့နေရာရောက်ဆိုပြီး..:) အဲဒီလိုတော့ မလုပ်ပါနဲ့.. မရောက်ချင်တဲ့နေရာတွေရောက်ကုန်မှာစိုးလို့ပါ… ဒါကြောင့် လမ်းမသွားခင် လမ်းကို တော့ အရင်မေးရမယ်.. ကိုယ်ရောက်တယ်မရောက်ဘူးဆိုတာက ပထမ လမ်းပြတဲ့သူပေါ်မှာ မူတည်တယ်… သူက လမ်းကိုကောင်းကောင်းပြတတ်ရင် ကိုယ်က သွားရတာသက်သာတာပေါ့.. ဒုတိယမှ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပေါ်မူတည်မယ်.. ပြတဲ့လမ်းအတိုင်း ဇွဲနပဲ နဲ့ ကြိုးစားမှ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ နေရာ ကိုယ်လိုရာကိုရောက်နိုင်တော့မှာပဲ….
အဲဒီလိုပဲ ကျွန်တော်တို့တွေ လွတ်မြောက်ချင်တဲ့ အလုံးစုံသော ဒုက္ခတွေ အကုန်လွတ်မြောက်အောင် ပထမ တော့ သူတပါးအပေါ်မူတည်လိုက်ပါဦး.. ပြီးတော့မှ ကိုယ့် ပေါ် မူ တည် ပြီး တော့ ကြိုးစားမယုတ် အားထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ လွတ်မြောက်ချင်တဲ့ ဒုက္ခအလုံးစုံကနေ လွတ်မြောက်မှာဖြစ်လို့ ကြိုးစားမယုတ်အားထုတ်လိုက်ပါဦးလို့ တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ နောက်ပို့စ်တွေမှ ထပ်ဆုံကြရအောင်…………………………….
Categories : ကိုယ်တိုင်လွတ်မြောက်ဖို့ဆိုတာ သူတပါးပေါ်မူတည်တယ်